Daawo sawirada : Warbaahinta oo liido Booqatay Iyo Sawirro naxdin Leh oo ay kasoo qaadeen. – Gedo Times
Daawo sawirada : Warbaahinta oo liido Booqatay Iyo Sawirro naxdin Leh oo ay kasoo qaadeen.
22nd January 2016 admin Somali News, Wararka Maanta 0
Labaatan qofood ayaa ku geeriyooday oo ay ka mid ahaayeen Kooxihii weerarka soo qaaday halka tira kala ay dhaawacyo soo gaareen kadib fiiddnimadii xalay Weerar ay Argagixisadu ku qaadeen Maqaaxid ku taala Xeebta Liido halkaas oo ay ku sugnaayeen Boqolaal shacabka oo goobta ku qaxweynayay,
Waxaana markiiba goobta gaaray Ciidamda Amniga kuwaas oo ka hortagay qatar intaas ka badan oo ay damacsanaayeen Argagixisada, iyagoo soo baddbaadiyay boqolaal shacab ah oo ku go’doomay goobta la weeraray.
Wasiirka Amniga gudaha ee Xukuumadda Soomaal mudane C/risaaq Cumar Maxamed oo la hadlay warbaahinta Dowladda aya ku dhawaaqay arroornimadii hore ee Saakay in la soo gaba gabeeyay saacada ka hor hawlgalkii ay ciidanka Amniga ka wadeen Maqaaxiyo ku yaalay Xeebta Liido.
Warbixin: weerarkii Liido lagu qaaday oo lasoo afjaray Iyo Khasaaraha oo kor u dhaafaya 20 dhimasho ah.
Kenya : Waxaan dilnay Taliyihii Hogaaminayay Weerarkii Ceelcadde.